Fahasamihafana eo amin'ny mpandraharaha sy ny Intrapreneur | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny mpandraharaha sy ny Intrapreneur | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / orinasa / fahasamihafana eo amin'ny mpandraharaha sy ny Intrapreneur
24 aogositra 2021 Narotsak'i Sethmini
Ny manan-danja eo amin'ny mpandraharaha sy ny maha samy hafa dia ny hoe intrapreneur ny mpandraharaha dia olona izay notendren'Andriamanitra, ny famoahana, ary mitantana vaovao raharaham-barotra , ary izay efa ho foana toy ny kely manomboka raharaham-barotra, nefa ny intrapreneur mpiasa dia efa miasa ao amin'ny orinasa iray.
Na ny mpandraharaha na ny intrapreneurs dia samy tokony hahay hifehy ny fahaiza-manao, ny faharanitan-tsaina ary ny fitarihana hahomby amin'ny asany. Mahaleo tena ny mpandraharaha ary manana fahalalahana bebe kokoa, raha ny intrapreneur kosa miankina amin'ny orinasany avy ary tsy manana fahalalahana. Indraindray ny olona manomboka ny fiainany amin'ny maha intrapreneurs azy dia lasa mpandraharaha mahomby amin'ny fananganana ny orinasany.
2. Iza no mpandraharaha
3. Iza no Intrapreneur
4. Mpandraharaha vs Intrapreneur amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Mpandraharaha vs Intrapreneur
Iza no mpandraharaha
Ny mpandraharaha dia olona mamolavola, mandefa ary mitantana orinasa vaovao. Ny teny hoe "mpandraharaha" dia avy amin'ny teny frantsay hoe "entreprenerd" noforonin'ny mpahay toekarena iray antsoina hoe Jean-Baptiste Say, izay midika hoe mpiantsena na mpitsangatsangana. Saika manomboka orinasa kely foana ireo mpandraharaha. Amin'izany fomba izany dia azon'izy ireo atao ny mankafy saika ny valisoa rehetra toy ny tombony be, ny laza ary ny fitomboana, nefa tsy maintsy hiatrika ny risika rehetra ateraky ny fampandrosoana sy ny fitohizan'ny orinasa koa izy ireo. Ny olona mahomby amin'ny famoronana hevitra, serivisy ary entana vaovao dia antsoina koa hoe mpanentana .
Ilaina ny fahaizan'ny mpandraharaha haminavina ny filan'ny olona eo amin'ny fiarahamonina ary hitondra ny heviny vaovao eny an-tsena mifanaraka amin'izany. Noho io antony io dia singa iray lehibe amin'ny toekaren'ny firenena iray izy ireo. Ny fizotry ny fahatongavana ho mpandraharaha dia manomboka amin'ny drafitra fandraharahana. Izany dia antontan-taratasy manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fanatratrarana ny tanjona sy ny tanjon'ny orinasa vao niforona. Aorian'ny famoronana ity drafi-pandraharahana ity, matetika ireo mpandraharaha dia mahita loharanon-karena ara-bola, manakarama mpiasa ary manao ekipa mpitarika izay manampy azy ireo hitantana ilay orinasa. Mandritra io fizotran-javatra io dia mety hahita fahasahiranana izy ireo amin'ny fitadiavana ireo loharanon-karena ara-bola sy ilaina eo amin'ny olombelona. Manana fahalalahana sy andraikitra betsaka ny mpandraharaha hatramin'ny nitondrany ny orinasany manokana. Mampitombo ny harem-pirenena izy ireo, mamorona fotoana ahafahana miasa ary mampivelatra ny sivilizasiôna maha-olona.
Ny mpandraharaha dia olona iray izay,
mamorona sy manomboka hevitra vaovao
manaiky sy mampiasa fotoana mety
mitantana ny loharanom-pahombiazana am-pahombiazana
mandray andraikitra mety
miatrika loza mety hitranga sy fisalasalana
manampy lanja ny vokatra na serivisy
mandray fanapahan-kevitra ahazoana tombony
mahita mialoha ny zavatra ilain'ny mpanjifa
Mpandraharaha malaza fantatsika rehetra i Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ary Oprah Winfrey.
Iza moa ny Intrapreneur?
Ny intrapreneur dia olona miasa amin'ny fanatsarana ny hevitra vaovao sy ny vokatra ao anatin'ny fetran'ny asa efa niasan'izy ireo. Ny teny hoe "intrapreneur" dia fitambaran'ny teny roa "anatiny" (intra) sy "mpandraharaha". Izy io dia noforonin'i Gifford Pinchot III sy Elizabeth S. Pinchot tamin'ny 1978. Ny intrapreneur dia manondro izay olona rehetra ao amin'ny orinasa iray izay manome ny fahaizany, ny fahitany ary ny vinavinan'izy ireo ho tombontsoan'ny orinasa. Izany dia manampy azy ireo hamorona hevitra vaovao ary hampihatra azy ireo hahatratra ny tanjona sy tanjon'ny orinasa nefa tsy miatrika loza mety hitranga. Amin'ny ankapobeny, ny intrapreneur dia mety ho olona, ​​manomboka amin'ny intern ka hatramin'ny filoha lefitry ny orinasa. Misy fotoana avelan'ny orinasa hifehezana feno ny tetikasa lehibe manan-danja izay ilaina amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Indraindray ireo izay manomboka ny asany amin'ny maha intrapreneurs azy dia lasa mpandraharaha tsikelikely rehefa manapa-kevitra ny hiala amin'ny orinasa iasany izy ireo ary hanangana orinasany manokana.
mampidi-doza ny fotoana na ny vola ara-bola
mizara ny valin'ny tetikasa intrapreneurial eo amin'ny orinasa sy ny intrapreneur amin'ny fomba mitovy.
dia omen'ny orinasa mahaleo tena hitarika asa isan-karazany
indraindray, lasa " kapitalista mpiambina " manokana ao anatin'ny orinasa
Intrapreneur malaza sasany
Ken Kutaragi, mpamorona PlayStation ao Sony
Paul Buchheit, mpamorona ny Gmail
Brothers Lars sy Jens Eilstrup Rasmussen, mpamorona ny Google Maps
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpandraharaha sy ny Intrapreneur?
Ny mpandraharaha dia olona mamolavola, mandefa ary mitantana orinasa vaovao, raha ny intrapreneur kosa dia mpiasa ao amin'ny orinasa miasa amin'ny fanatsarana ny hevitra sy vokatra vaovao ao anatin'ny faritry ny asany. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny mpandraharaha sy ny intrapreneur dia ny mpandraharaha dia mpanorina orinasa vaovao, fa ny intrapreneur kosa dia mpiasa efa miasa ao amin'ny orinasa iray. Indraindray ireo izay manomboka ny asany amin'ny maha intrapreneurs azy dia lasa mpandraharaha tsikelikely rehefa manapa-kevitra ny hiala amin'ny orinasa iasany izy ireo ary hanangana orinasany manokana.
Ity infographic etsy ambany ity dia mitanisa ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpandraharaha sy ny intrapreneur amin'ny endrika tabilaoro raha ampitahaina.
Famintinana - Mpandraharaha vs Intrapreneur
Ny mpandraharaha dia olona mikasa, mandefa ary mitantana orinasa vaovao, izay saika manomboka amin'ny ambaratonga kely foana. Ny mpandraharaha dia manana fahalalahana manao zavatra saika hampisondrotana ny orinasa ary hahatratra ny tanjona sy ny tanjony. Mila mahita irery ny loharanon-karena ara-bola sy ny olombelona ary miatrika risika samirery izy ireo nefa miaraka amin'izay dia mahazo fotoana hankafizana ny valisoa rehetra ihany koa. Ny intrapreneur dia mpiasa. Ny intrapreneurs dia tsy manana fahalalahana firy amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasa. Omena azy ireo ny loharanon-karena ilaina, ary ambany dia ambany ny risika. Ny valisoa azo noho ny asa mafy ataon'ireo mpampiasa vola dia zarain'izy ireo sy ny mpandraharaha. Araka izany, ity no famintinana ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpandraharaha sy ny intrapreneur.
1. “ Fandraharahana .” Wikipedia , Wikimedia Foundation, 20 Aog 2021.
2. “ Intrapreneurship .” Wikipedia , Wikimedia Foundation, 13 feb 2021.
1. " Entrepreniti-créativation-inovasi-4784289 " (CC0) tamin'ny alàlan'ny pixel
2. " Boss faly amin'ny asan'ny mpiasa " (CC0) via Pixahive
Fahasamihafana eo amin'ny antoka sy ny antoka Fahasamihafana eo amin'ny receivership sy ny Liquidation Fahasamihafana eo amin'ny mpividy sy ny mpanafika Fahasamihafana eo amin'ny fampidirana sy ny voafetra Fahasamihafana eo amin'ny varotra sy ny orinasa
Filed Under: Orinasa
Fahasamihafana eo amin'ny Zinc sy ny Nickel Plating
Fahasamihafana eo amin'ny solifara, solifara ary solifara
Fahasamihafana eo amin'ny fiatoana sy ny fitohizan'ny any Java
Fahasamihafana eo amin'ny 3G sy 4G any Aostralia
Fahasamihafana eo amin'ny Art Baroque sy ny Renaissance Art